မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ အမေများအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားဆိုလာတဲ့ ဖွေးဖွေး
အမြဲအနွံတာခံပြီး ထက်မြတ်တဲ့ အမေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်တဲ့။
ဖွေးဖွေးကတော့ အမေများနေ့မှာ သူမ ချစ်ရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူအကြောင်းကို ပြောပြရင်း အမေများနေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်အချစ်တော်မလေး သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးကတော့ မေလ(၁၀) ရက်နေ့ အမေများနေ့မှာ သူမရဲ့ မိခင်အတွက် ရင်ထဲကလာတဲ့ စကားလုံးလေးတွေနဲ့ ဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ရဲ့ ဆုံးမစကားတွေကိုလည်း အမြဲ နာခံခဲ့တယ်လို့ လည်း ဖွေးဖွေးက ပြောပါတယ်။
"Happy Mothers' Day to all the moms out there! ရိုးရိုးအေးအေး လေး နဲ့... အားလုံးကို အမြဲ အနွံတာခံတဲ့... ထက်ထက်မြက်မြက် အမေတစ်ယောက် ကျွန်မမှာရှိတယ်။ အားလုံးအပေါ် ရိုးသားဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုးသားဖို့ သင်ပေးခဲ့တယ်။ & Thx for letting me be myself as always too mom..Not just today I Love you everyday. & အမေ ဆိုတာ တစ်ခါတုန်းကသမီးပါပဲ။ ဖွေးမေမေ ရဲ့ အမေ ( ဖွေး ဖွားဖွား ကို အမေငယ်ငယ်ထဲက ဆုံးရှုံး ခဲ့ရပေမယ့် အမြဲချစ်ပြီး အဖွားဆုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်း အမေနေခဲ့တယ် ... အမေ မရှိတော့ တဲ့သူများလည်း ရင်ထဲမှာ အမြဲ ထာဝရမေမေ ရှိနေပါတယ်နော်။ အမေတွေ အားလုံး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းကြပါစေ။ (P.S ဒီကာလမှာမို့ အရမ်းအားပြီး ဒီလိုပုံတွေများကြီး နဲ့ အမေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုနိုင်တာပါ #BrightSide)" ဆိုပြီးတော့ မေလ ၁၀ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဖွေးဖွေးကတော့ မိဘနှစ်ပါးအပေါ် အရမ်းချစ်ပြီး အရမ်းသိတတ်တဲ့ သမီးလိမ္မာလေးဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိကြမှာပါ။ သူမဟာ မကြာခဏဆိုသလို အနုပညာအလုပ်က ရရှိတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို အမြဲကန်တော့လေ့ရှိပါတယ်။ ဖွေးဖွေးဟာ အနုပညာလောကထဲကို တီဗီကြော်ငြာတွေ စတင်ရိုက်ကူးရင်းကနေ သရုပ်ဆောင် လောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်သာမက သီချင်းဆိုတာကိုလည်း ဝါသနာပါသူဖြစ်တာကြောင့် Stay Home ကာလမှာ သူမကိုယ်တိုင် သီဆိုထားတဲ့ " ငါ့ကမ္ဘာထဲ" ၊ "ဘိုမ" စတဲ့သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။